Mo Farah oo ka qeybgalayo Tartanka Oradka ‘’London Marathon’’ – idalenews.com
Mo Farah oo ka qeybgalayo Tartanka Oradka ‘’London Marathon’’
Oradyahanka Soomaalida ee heysta Dhalashada Dalka Britain, Mo Farah ayaa sheegay inuu ka qeybgali doono Tartanka Oradka dheer ee lagu wado in maalinta Axada ee soo socto lagu qabto Caasimadda Dalka Britain ee London.
Mo Farah ayaa hadalkaan sheegay xilli aad loo hadal hayo Qaraxyadii Asbuucan lala beegsaday Tartanka Oradada ee ka dhacay Magaaladda Boston ee Dalka Maraykanka oo ay ku geeriyoodeen Saddax qof kuna dhaawacmeed in ka badan 180-qof.
Mo Farah oo degan Oregon ee Dalka Maraykanka, ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in la qabto Tartanka Sunday’s London Marathon, si taageero loogu muujiyo Oradyahaanadii lagu bartilmaameystay Magaaladda Boston.
Mo Farah oo 30-jir ah, ayaa noqday Xidig Orodada Marathon-ka kadib markii uu ku guuleystay Orodkii 5,000m iyo 10,000m ee Tartankii Olympic ee lagu qabtay Magaaladda London.
‘’ London waa Magaallo weyn, waa halkii aan ku soo koray, waa halkii aan wax kasto ku sameeyay’’ ayuu yiri Mo Farah, oo intaa ku daray inuusan wax walaac ka qabin Tartanka Orodada ee dhici doono Maalinta Axada.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa aad loo adkeeyay Ammaanka goobta lagu qabanayo Tartanka Orodada ee London, iyadoo Ciiddamo farabadan heegan la galiyay.
Taliye ka tirsan Militeriga Maraykanka oo ka hadlay Ammaanka Somalia